Shona | Nhetembo - Detembai Titandare - Part 3
Ndipo pazvinoda, uri parumananzombe, Kungosvika pazvafungira semudzimu, Mahwekwe newandakaramba gorero, Dhuma-dhuma, ongoerekana anyuka sehowa, Kusvikira panhamo semwana wemusango! Tsoka zvino neshena dzazoti mbe-e,…
Posted On 22 Nov 4 Mar
Diko naMwari muchanditaurirawozve, Kwazvakatanga nekwazvichaperera, Kwazvakarehwa nekwazvakatsanangurwa, Ndo’kutsva demo pachisara mupini! Kuno madzimai avandisa kupfura varume, Kana harahwa dzinoda barika dzazvikonevavo! Pese-pese dzangove…
Posted On 16 Aug 18 Aug
Tora wuta hwako
Vashe vashe woye (Tora wuta) Hwako toda kuenda (Dzinoruma) Nyuchi (Dzinoruma) Vashe vashe woye …
Posted On 8 Aug 10 Aug
Hwahwa ndinohwuda zvangu
Bhachi ndarova zvese nemutsipanyoka, Nebhurugwa rine mupono onocheka nhunzi, Kunanga mberiyo kwandanzwa ngoma kurira, Ndati ndiite zvekubata jongwe muromo. Hwangu ukama nechingoto ndehweguyo…
Posted On 7 Aug 10 Aug
Munhu wagara ndewenyama! Vanongonditaura vanaChinyama, Kuvavarira kuti ndiite munyama, Pandinongoti nzve-e, vofinyama, Manyama amira nerongo, zvaminyama! Ndakatanga zvangu ndakanyarara, Vachindibata huyanga semarara, Nhaka…
Posted On 1 Aug 10 Aug
Musatonga, tinobva kwakasiyana, Kachana, kusingabviri kudzoka, Kukurukura vamwe zvakatipotsa, Kupona napaburi retsono chaiko! Ndezvekutopembedza Nyadenga. Takava navo vaitituka nekuranga, Zvose baba namai, kukomborerwa,…
Zidzikana dzvuku randaona apo (Kurwerwa rute serinodyiwa nyama) Chembere dzekuno dzine manenji (Kubika doro rinenge mukaka) Zvanzi chakauya ndechakauya (Mwana wehama ambori nei)…
Haiya woye woye vakuru woye (Nhemamusasa) Hanzvadzi yamai wako zvaisingarimi (Nhemamusasa) …
Posted On 27 Jul 26 Jul
Vakuru vaita munhikwi
Zvingori maringe nenyaya yesadza, Mari yagara yakashata, ine chitema! Kwazvakarehwa vaiti meso kuunyana ruzivo, Chese chaitwa navakuru chaiwe chinake! Zvino inga mariva takateya…
Iye wamunoti ndewe mapoto, Nyangwe zvake achichachura poto, Vane gondo voti chipuka, heto, Mukadzi haarambirwi kuroya, zviroto, Kutaura kuno totoronga muchato, Nhaka naye…
Kithy Runhare on Imwe nhamo kuzviparira
Succeed Edwin on Kugarira hari sembwa
admin on Kugarira hari sembwa
Peter Makwanya on Kugarira hari sembwa
Designed by CodetoRank.com. © 2021 Nhetembo - Detembai Titandare. All Rights Reserved.